Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Jacaylka Raasamaalka Badweynta Hindiya
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Aroosyada Jaceylka Malabka • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Caasimada Jaceyl ee Seychelles
Tirooyinku waxay si weyn ugu hadlaan jasiiradaha badweynta Hindiya ee qalaad, iyadoo ku dhawaad ​​5,000 oo qof ay doorteen inay Seychelles ka dhigaan arooskooda ama hoygoodii malabka illaa sannadkan - oo muujinaya sida Seychelles ay weli u tahay meel ay doorbidaan dadka safarka ah ee ka kala yimid daafaha dunida.
Tan iyo markii dib loo furay xuduudaheeda, tirooyinka booqdayaasha ayaa kor u kacay ilaa 50 boqolkiiba heerarkii ka horeeyey COVID.
Guur -guurayaasha ayaa ku dhawaad ​​1 ka mid ah 10 -kii qof ee soo booqday Jasiiradaha Seychelles sannadka 2021 -ka.
Xitaa iyada oo ay jirto masiibada, Seychelles waxay isku sii adkeysay inay tahay caasimadda malabka ee Badweynta Hindiya.
Waxay muujineysaa soo kabasho wanaagsan oo loogu talagalay dalxiiska caalamiga ah, warkan wuxuu imaanayaa iyadoo Seychelles ay dhaafeyso 50,000 oo qof oo soo booqday tan iyo wejigii ugu dambeeyay ee dib -u -furisteeda adduunka, iyadoo dalxiisayaasha ay yihiin 76 boqolkiiba guud ahaan rakaabka. Tan iyo markii dib loo furay xuduudaheeda, tirooyinka booqdayaasha ayaa kor u kacay ilaa 50 boqolkiiba heerarkii ka horeeyey COVID.
In kasta oo ay jiraan cadaadisyada masiibada, Seychelles ayaa isku sii adkeeyay inay tahay caasimadda malabka ee Badweynta Hindiya. Xogta dadka socotada ah ee lagu qabtay nidaamka Oggolaanshaha Safarka ee Jasiiradaha Seychelles ayaa muujinaya 3,852 malabyo -doon ah oo ku soo degaya xeebaheeda 3dii bilood ee la soo dhaafay. Kuwaas, kuwa is -guursaday ee cusub ee Israa’iil ayaa kaalimaha hore ka galay 413 lammaane oo booqday jasiiradaha, waxaa si dhow ula socday Saudi Arabia (229) iyo UAE (208). Isla muddadaas, Seychelles ayaa iyaduna ahayd meesha loo doorto 570 aroos (1140 qof).
Iyada oo warshadaha dalxiiska adduunka oo dhan ay wajahayaan waqti adag, meesha fasaxa, baxsad caan ah oo caan ku ah xeebaha cad, bacaadka leh, biyo diirran oo diirran iyo dhir iyo xayawaanno kala duwan ayaa maalin walba arka tirooyinkooda imaatinka oo kor u sii kacaya tan iyo markii dib loo furay 25 -kii Maarso 2021. Booqashada celceliska ee Seychelles waa 11 maalmood, waqti ku filan oo si buuxda loogu raaxaysan karo waayaha maxalliga ah.
Ka shaqaynta sidii loo hubin lahaa in Seychelles ay u ahaan lahayd meel COVID-aamin ah, Ogolaanshaha Socdaalka Jasiiradaha Seychelles ee dhowaan la bilaabay, oo ay xoojisay Travizory, ayaa u oggolaanaysa dawladda inay baarto oo ay oggolaato rakaabka imaanshaha kahor-oo ay ku jiraan xaqiijinta baaritaannada PCR iyo shahaadooyinka tallaalka.
Hawsha oggolaanshuhu waxay qaadataa 5 daqiiqo oo keliya si loo dhammaystiro waxayna dammaanad -qaadaysaa nabadda maanka ee dalxiisayaasha doonaya inay baxsadaan inta uu jiro aafadu. Ka qaadista malo awaalka safarka Ogolaanshaha Socdaalka ee Jasiiradaha Seychelles ayaa u suuragelisay qaranka jasiiraddu inay si nabad ah oo xilkasnimo leh u furmaan.
Iyada oo xannibaado socdaal ay ka jiraan suuqyo badan oo dhaqameedyadeedii Yurub, Seychelles waxay xudduuddeeda u furtay dalal badan oo cusub waxayna diiwaangelisay lambarro imaatin oo aad u wanaagsan oo ka yimid dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta (UAE), Israel, Jarmalka iyo Ukraine. qeybtii hore ee sanadka.
Iyada oo ilaa 10,000 oo booqdeyaal Ruush ah ay ku qulqulayaan xeebaheeda, jasiiraddu waxay filaysaa in tirooyinka si aad ah u kordhaan marka waddamada kale ee Yurub ay fududeeyaan xannibaadaha safarka.
Seychelles waxay xaqiiqdii filanaysaa maalmo ifaya iyadoo helitaanka duullimaadyada ka imanaya Yurub, hoy u ah suuqyadeeda ilaha ugu weyn, ay kordhayaan Luulyo imaatinka Edelweiss iyo Condor iyo Air France oo ay suuragal tahay inay ku laabtaan meeshii loo tilmaamay Oktoobar 2021.
Marwo Sherin Francis, Xog -hayaha Guud ee Dalxiiska, ayaa tiri: “Waxaan filaynaa maalmo wanaagsan oo soosocda warshadaha, isbeddellada ballan -qaadka ee hadda jira waxay ka tarjumayaan saadaashii aan samaynay bilowgii sannadka. Diiwaanadu waxay muujinayaan in Seychelles ay heli karto in ka badan 149,000 marka la gaaro Diseembar 2021, taasoo warshadaha u noqon doonta war aad u wanaagsan. Waxaan ku kalsoonahay in marka tallaalka uu ka socdo dalal kala duwan, kalsoonida macaamilka ayaa sii kordheysa tanina waxay saameyn ku yeelan doontaa tirooyinka imaanshaha sannadka intiisa kale. ”
Mr Alan Renaud, Xoghayaha Guud ee Duulista Hawada, ayaa yiri: “Calaamadeynta 50,000 oo socdaal ah tan iyo markii la bilaabay Nidaamka Ogolaanshaha Socdaalka waa guul taariikhi u ah Seychelles, iyo in la sameeyo inta lagu jiro aafada waxay caddeyn u tahay xikmadda diirad-saarida macaamiisha iyo doorashada farsamada. Taasi waxaan ku gaarnay kala bar heerarka dalxiiskeena 2019 lix isbuuc gudahood tan iyo markii la bilaabay waxay xaqiijineysaa adkeysiga iyo soo jiidashada meesha aan ku soconno. Markaan fiirino hore, waxaan sii wadi doonnaa inaan maalgelinno khibradda safarka si aan u fududeyno dalxiiska, oo aan u muujino hal -abuurnimo farsamo si aan u siino heerar aan la bar -bar dhigin oo heer sare ah oo wax -soo -saar iyo adeeg. ”